Paweł M., Mpanoratra ao amin'ny SmartMe
Lahatsoratra nosoratan'i Paweł M.
Dom » Lahatsoratra navoakan'i Paweł M.
Nahazo an'i Nuance i Microsoft. Mahagaga ny vola
ai, Microsoft, Nuance, fankasitrahana ny kabary, fandikana
Microsoft goavambe Microsoft dia naka an'i Nuance, orinasa iray izay mamorona faharanitan-tsaina. Araka ny tatitra farany, ny sandan'ny fifanakalozana iray manontolo dia nitentina USD 19,7 miliara. Noho io hetsika stratejika io dia hampitombo ny anjarany amin'ny fanatsarana ny faharanitan-tsaina artifisialy i Microsoft. Nuance ...
Cardlax EarBuds Washer hanasa ny headphones anao
Cardlax EarBuds Washer, headphone tsy misy tariby, headphones tws, tws
Nisy fitaovana iray nipoitra tao amin'ny Kickstarter izay hanampy amin'ny fitazonana headphones tsy misy tariby ho madio. Ny Cardlax EarBuds Washer dia mitovy amin'ny milina fanasan-damba kely ary koa manao io asa io. Mendrika hodinihina ve ny fividianana? Ny fampiasana matetika ny ...
Apple TV amin'ny farany miaraka amin'ny fanohanana 120 Hz?
paoma, paoma tv +
Azo inoana fa hahita ny hazavan'ny andro amin'ity enim-bolana ity ny taranaka vaovao an'ny Apple TV. Matetika hatrany dia lazaina fa tokony hanohana ny tahan'ny famelomana sary 120 Hz. Vaovao momba ny fanohanana voalaza ...